च्याङ्लीमा शिवरात्री मेला २०७५ को तयारी तीब्र, भलिबल विजेतालाई १० हजार पुरस्कार दिइने । – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार २०७५, ८ फाल्गुन बुधबार १५:४५
फागुन ७, गाेरखा ।
पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ७ च्याङलीको पुरानो ऐतिहासिक मन्दिर मंगलेश्वर महादेव मन्दिरमा हुने शिवरात्री मेलाको तयारी तीव्र पारिएको छ ।
आगामी फागुन २० गते शिवरात्रीका दिन बिशेष शिवरात्री मेला को अवसरमा विविध कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ । शिवरात्रीको पूर्व सन्ध्या पारी फागुन १८ र १९ गते सञ्चालन गरिने भलिबल प्रतियोगितामा नगरपालिका भित्रका मात्र टिमहरुको सहभागी गराइने खेल संयोजक इश्वर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रतियोगितामा सहभागी भई प्रथम हुने टिमलाई नगद रु. १०,००० र प्रमाण पत्र एवं दाश्रो हुनेलाई नगद रु.५,००० र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । खेलमा सहभागी समूहसंग इन्ट्री शुल्क बापत रु.१००० लिने आयोजकले जनाएको छ ।
सो स्थानमा धेरै अघिसम्म ५, ६ दिनसम्म मेला लाग्ने र देशको राजनितीक परिवेश संगै सुस्ताउँदै गएकोमा स्थानीयहरु यसलाई पुरानै विरासतमा फर्काउनुपर्छ भन्नेमा लागी परेका छन् । त्यसको लागी आगामी वर्षदेखि शिवरात्री को अवसर पारेर शिवरात्री महोत्सव सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् ।
यस वर्ष भने मन्दिर निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको हुँदा महोत्सवको रुपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएकोले शिवरात्री विशेष कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमको संयोजन गर्ने जिम्मा गोरखा संसार मिडिया प्रा.लि.लाई दिइएको छ । मिडियाका अनुसार शिवरात्रीको पूर्वसन्ध्याका अवसरमा फागुन १८ र १९ गते पालुङटार नगरपालिका भित्रका टिमहरुबीच भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न हुनेछ भने शिवरात्री का दिन फागुन २० गते विहान देखि भजन किर्तन, दिउँसो साँस्कृतिक कार्यक्रम सहित, नृत्य प्रतियोगिता, राष्टिय तथा स्थानीय कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने र पुन रातभर विभिन्न स्थानहरुका भजन मण्डलीहरुद्धारा भजन किर्तन गरी राती बत्ती बाल्दै जाग्राम वस्नेहरुका लागी सहयोग गरिने छ । कार्यक्रमका लागी लाग्ने आवश्यक खर्चको लागी विभिन्न संघसंस्थाहरु संग समन्वय गरिरहेको मिडियाका सञ्चालक रविन्द्र कंडेलले बताउनुभयो । कंडेलका अनुसार यस वर्ष करीब १५ वटा स्टलहरु राखिनेछन । एक दिन मात्रै भएपनि केहि स्टलहरु राखिने जसमा स्थानीय स्तरका उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने अन्य व्यापारिक संघ संस्था तथा वित्तीय संघसंस्थाले पनि स्टल राख्न चाहेमा पाउनेछन् ।
कार्यक्रमको दौरानमा उठेको सहयोग बाट बचेको रकम मन्दिर व्यवस्थित गरी यसको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका विकासका कामका खर्च गरिनेछ ।
स्टल राख्न तथा कार्यक्रमको लागी प्रायोजन लगायत अन्य सहयोग गर्न चाहेमा मन्दिर व्यवस्थापन समिति वा गोरखा संसार मिडिया प्रा.लि. मार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ । कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण www.gorkhasansar.com बाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
१८ र १९ गते हुने भलिबल प्रतियोगिताका नियमहरु ः
प्रतियोगितामा पालुङटार नगरपालिका भित्रका समूहहरुले मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।
खेलाडीहरु पालुङटार नगरपालिका बासी हुनुपर्नेछ ।
हरेक समूले खेलाडीको नाम खेल शुरु हुनु अगावै आयोजकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
सहभागिता शुल्क रु.१००० लाग्नेछ ।
प्रथम हुनेलाई नगद रु.१०,००० र प्रमाण पत्र एवं दोश्रो हुनेलाई रु.५,००० र प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।
प्रतियोगिता नक आउट सिस्टमबाट खेलाइनेछ ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनेले फागुन १७ गते भित्र टिम दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ ।
अन्य आवश्यक जानकारी लिनुपरेमा आयोजकसंग सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
आयोजकको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
२०७७, ९ जेष्ठ शुक्रबार १४:४०
चुनाव हुन्छ भनेर भ्रममा नपरौं – केपी शर्मा ओली श्री ३ महाराज बन्ने खोजे
२०७७, १४ पुष मंगलवार १९:३६
प्रदेश न ५ व्यावसायिक कि सरकारी ? हेर्नुस मुख्यमन्त्रिको अाधिकारीक वेभसाइट
२०७४, ३० चैत्र शुक्रबार १९:२८
२०७५, १५ मंसिर शनिबार १०:०७